IKM! Aogositra, volan’ny varatava - ewa.mg
News - IKM! Aogositra, volan’ny varatava
Varatava, heverina fa mbola vaovao amin’ny sofin’ny maro ity voambolana tena malagasy ity, kanefa milaza endri-javakanto iray, miroborobo sy be mpankafy, amin’izao fotoana izao. Sary endrik’olona vita hosodoko, nalain-tahaka avy amin’ny saripika na natao teo am-pijerena ilay olona mivantana ny atao hoe varatava.
Tsy vitsy ny tanora manan-talenta amin’izany, voaporofo amin’ny fahamaroan’ireo manao ity karazana hosodoko ity ho antom-pivelomana mihitsy, amin’ny toerana samihafa, eto an-dRenivohitra. Maro, rahateo, ny olona tia atao hosodoko. Ho fampivondronana io talenta iombonana io sy hisian’ny sehatra ifampizarana traikefa, tafajoro ny Varatava Association.
Hatramin’izay, tsy mbola nisy ny hetsika natokana tanteraka ho an’ny varatava. Ankehitriny kosa, manoloana iray volana be izao ho an’izany ny fikambanana. Hanomboka rahampitso io hetsika io ary hotanterahina eny amin’ny Ivontoeran’ny kolontsaina malagasy (IKM) eny Antsahavola. Fampirantiana, fanaovana varatava eo no ho eo, fifaninanana, sns. Hatevina ny fandaharam-potoana, mifanojo indrindra amin’ny fiantombohan’ny fotoam-pialan-tsasatra ho an’ny kilonga.
L’article IKM! Aogositra, volan’ny varatava a été récupéré chez Newsmada.
Belindo – Bekily : sokatra 16 tratran’ny zandary
Sokatra miisa 16 tratra nentin’ny roa lahy tao amin’ny kaominina ambanivohitr’i Belindo, distrikan’i Bekily. Nandritra ny fisafoana nataon’ny zandary tao amin’ity kaominina ity no nandeha bisikileta izy ireo. Raha vantany vao nahatazana ireo zandary mpanao fisafoana izy roa lahy, nilefa niaraka amin’ny bisikileta nitondrany ireto sokatra ireto. Navelany teo kosa ireo sokatra. Nanara-dia nanenjika ireo roa lahy mpanao trafikana sokatra ireto ny zandary, saingy tsy tratra intsony izy ireo. Taorian’ny fanadihadiana rehetra, natolotra ny lehiben’ny sampandraharaha misahana ny fiarovana ireo biby arovana amin’iny faritra iny ireto sokatra ireto. Hatreto aloha, tsy mbola fantatra mazava ny toerana nakana ireto zana-tsokatra ireto. Efa mandeha kosa ny fanadihadiana rehetra momba ity raharaha ity ka aorian’izay ny hamantarana ny marina rehetra. Maro ireo mpanao trafikana sokatra tratran’ny mpitandro filaminana any amin’iny faritra atsimo iny. Tsikaritra anefa fa mitady irika hatrany ireo mpanao trafika hamoahana an-tsokosoko izany na eo aza izao fikatonan’ny lalana noho ny fiparitahan’ny valanaretina Covid-19 izao.J.CL’article Belindo – Bekily : sokatra 16 tratran’ny zandary a été récupéré chez Newsmada.
Varibolo Mazoto: manasoa ny mpiara-belona amin’ny alalan’ny otra sy ny kabary
Samy manana ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana ho azy ny olombelona rehetra. Mpikabary sady mpanotra itoeran’ny talenta voajanahary Rakotozafy Herinjaka Robert na fantatry ny maro amin’ny hoe Varibolo Mazoto amin’ny sehatra maro, toy ny kabary, ny otra, ny skoto… Monina eny Belanitra, Akadikely Ilafy, Avaradrano, ny lehilahy. Nanomboka ny taona 2004 izy no efa nikabary tamina sehatra maro anisan’ny nampitombo ny traikefany. Lasa takon’ny fahalalana ny fitiavana sy ny fihavanana, izay hoe, izay miteny no mpitondra fitenenana fa tsy izay tompon’andraikitra tokony hiteny. Tsy ratsy ny fandrosoana fa ilaina ny fototra sy ny loharano ara-pomba malagasy. Mpandala ny nentin-drazana ihany koa i Varibola ary mifameno tsara amin’ny asa fikabariana ataony tsara izany. Manana ny teny filamatra ho azy manokana izy, “Otra sy kabary no hitsaboako ny marary, ravinkazo sy tambavy no analako ny mosavy. Tsy mitaiza aho fa mitsabo, manao ny asa nanirahin’ny Avo fa izy no nanendry, nanome fahendrena, indrindra ny talenta, hanasoavana ny olona rehetra”, izany ny hafatry ny tovolahy. Manasoa ny mpiara-belona aminy amin’ny alalan’ny fanorana i Varibolo ary anisan’ny manavanana azy ny aretina ahozatra, ny taolana, ny nofo, indrindra ny taova ao anaty. Tsy nianarana akory izany fa efa ato anaty, araka ny nambarany hatrany. Manana ny tambajo-tserasera “facebook” “Herinjaka Varibolo” ny tenany ho an’izay te hiaraka hiasa sy hifanerasera aminy, indrindra ny fanasoavana ny mpiara-belona.NarilalaL’article Varibolo Mazoto: manasoa ny mpiara-belona amin’ny alalan’ny otra sy ny kabary a été récupéré chez Newsmada.
Hetsiky ny fanoherana: hikaon-doha hamaha ny olan’ny firenena ny RMDM
Tsy hitsikera fotsiny. Manomana fikaonandoham-pirenena hikaroham-bahaolana ny eo anivon’ny RMDM, tarihin’ny mpanorina, Ravalomanana Marc. “Ho avy tsy ho ela izany manoloana ny tsy fetezan-draharaha eto amin’ny firenena. Hampahafantarina ny rehetra izany ary hanazavana amin’ny antsipiriany fa ao anaty krizy maro sosona isika. Tsy hijery fotsiny ny tsy fanajan’ireo tompon’andraikitra ny lalàna velona sy ny lalàna fototra misy eto amin’ny firenena”, hoy izy tetsy Bel Air.Handray anjara amin’izany ireo antoko politika , ny sendika, ireo vondron’olona tsy manaiky ny fitantanana ny firenena, ny firaisamonim-pirenena ary ny olom-pirenena, tsy mitovy hevitra, mahatsapa fa voahitsakitsaka ny zo aman-kasiny. Hatsangana ny vaomiera isan-tokony. Anisan’izany ny hisahana ny politika. Handinika ny tsy fisian’ny demokrasia, ny jadona ary ny ramatahora. Eo koa ny vaomiera hiresaka ny sosialy sy toekarena. Handinika ny fahantrana mianjady amin’ny vahoaka, ny fiakaran’ny vidin’entana, ny kere sy ny fampianarana ary ny tsy fahampiana sakafo, ny Jirama ary ny tsy fisian’ny asa. Hisy koa ny fandinihana ny raharaham-panjakana, ny fisaraham-pahefana eo amin’ny mpanatanteraka, ny mpanao lalàna ary ny mpitsara.Fandriampahalemana, ny fitsarana…Ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana, ny tsy fijerena ny laharam-pahamehan’ny vahoaka, miaraka amin’ny antokom-pinoana toy ny FFKM sy ireo mpandinika ny feom-bahoaka. Manampy izany ny lafiny fitsarana, handinika ny momba ny fanitsakitsahana ny lalàmpanorenana, ny lalana mifehy ny fanoherana sy ny antoko mpanohitra ary ny fitsarana tsy mahaleo tena. Mamarana izany nefa zava-dehibe ny resaka fandriampahalemana. Ny asan’ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao, ny fandriampahalemana eny ambanivohitra sy an-drenivohitra ary ny fandrindrana ny fitaovana entina miasa sy ny vola enti-manana.Araka izany, ho tonga hatraiza izao fikaonandoham-pirenena tarihin’ny RMDM izao?Synèse R. L’article Hetsiky ny fanoherana: hikaon-doha hamaha ny olan’ny firenena ny RMDM a été récupéré chez Newsmada.
Tezera f’aza manoto!
Ilaina ampatsiahivina amin’ny sokajin’olona maro foana fa ny toerana no mitoetra saingy ny olona no mandalo. Tsy misy tompon-toerana ho doria izany! Noheverina ho efa lefy mantsy ny fanesorana ny mpanazatra nasionalin’ny ekipampirenena malagasin’ny baolina kitra na Barea ary mivonona amin’ny fandraisan-toeran’ny mpandimby azy ny rehetra. Akory ny hagagana rehefa nahita ny fanehoan-kevitry ny mpilalaon’ny Barea iray izay mivoatra any ivelany. Saika nikasa hanao ampamoaka angaha hoe sa saika haninona fa nihemotra tampoka nony injay nahita ny teny mafy nasetrin’ireo mpikirakira Facebook raha namaky an’izao filazany ny « fifandraisana mafimafy eo amin’izy sy ny mpanazatra vaovao » izao. Tsy tokony hohadinoina, indrindra ho an’ireo matihanina amin’ny fanatanjahantena, fa ny vokatra no lehibe indrindra. Na inona na inona mety ho kendritohina nandrasan’ny mpanapa-kevitra talohan’ny nanesorana an’i Nicolas Dupuis, mpanazatra nasionaly teo aloha, dia tsy nanome rariny azy ny vokatra farany izay nahararaka antsika ka tsy nahatafakatra ny Barea amin’ny CAN 2021. Mety ho toy ny piti-dranomamy nararaka tany an-dranomasina fotsiny ireny kiana momba ny fampivadiana andraikitra hafa amin’ny naha mpanazatra nasionaly azy ireny, na koa ny fifanarahana aradoka sy ny sisa, raha tafakatra CAN teo indray isika. Ny vokatra, ny vokatra ihany no manan-danja! Asa raha mila mianatra mamalona pejy isika isaky ny misy fanovana, na amin’ny lafiny inona na inona. Handroso aiza raha hivazavaza sy hitabataba lava amin’ny zavatra efa lasa? Zon’ny tsirairay kosa, indrindra ireo mpilalao azo antsoina handrafitra ny ekipam-pirenena, ny mankafy na mankahala ny mpanazatra nasionaly vaovao. Fa aoka haverina (ampianarina) indray fa voafehin’ny fitsipiky ny baolina kitra iraisampirenena ny famalian’ireo mpilalao ny antso amin’ny fifantenana ataon’ny mpanazatra nasionaly. « Sélectionneur » mihitsy moa no famaritana azy amin’ny teny frantsay na azo adika hoe « mpifantina » fa isika no nizatra tamin’ny hoe «mpanazatra nasionaly ». Masi-mandidy ny « mpifantina ». Mamaky ady ary tahaka ny manava-tena sahady ireo mpilalao be fanakianana, indrindra moa raha tsy mbola nisy na inona na inona noporofoin’ilay mpanazatra vaovao akory. Tsy vitan’ny halako bika tsy tiako tarehy izany famaliana sy fanajàna ny ekipam-pirenena izany. Tsy vitan’ny tora-po ary tsy azo ampidirana fihetsem-po ka hoe mety ho tsara fifandraisana tamin’ilay teo aloha ianao dia hanao zinona an’ilay misolo toerana. Mba misy fifanajana faran’ny bitika ihany no mila tazonina fa tsy entinentin-javatra eny amin’ny tambajotran-tserasera eny. Manahirana sady tena manakorontan-javatra ny « teny tsy voahevitra ». Asa koa na ny tsy famarinan-toeran’ny Federasiona malagasin’ ny baolina kitra ankehitriny no mampivaralila an’ireo mpilalao sasany. Angamba, fotoanan’ny fahasahiana mampihatra ny fitsipipifehezana ihany koa izao, fa efa fahita izany mpilalao fantadaza maneran-tany izany no nitodihan’ny mpanazatra lamosina nandritra ny taona maro noho ny raharaham-pitsarana nitambesatra taminy. Ny toerana mitoetrana fa ny olona mandalo. Nisy ireo mpilalao malagasy niampanga ny federasiona kanefa niverina am-bala ihany. Izao indray ka misy miampanga mpanazatra na tsy mbola nisy asa natao mety nahafahana nanamelohana azy akory aza. Te hahazo vokatra ny Barea. Irariana ho lasa lavitra ny Barea. Tiana hivoatra ny Barea. Fa tsy hahatonga ny Barea hatraiza raha tsy mbola miainga akory dia efa terena hisy siasia sahady! L’article Tezera f’aza manoto! est apparu en premier sur AoRaha.
Mila asa mivaingana: olona 916 201 tsy misy fiahiana sakafo
25 taona ny fifanarahan’ny Firenena mikambana iadiana amin’ny haha tany efitra ny firenena ianjadian’ny haintany aty Afrika. Anisan’ny nanao sonia ny fifanarahana i Mdagasikara ny taona 1997. Hatramin’izao fotoana izao, mbola marefo ny mponina iharan’ny haintany matetika any atsimo ary sasatra ny miarina ny mponina, indrindra amin’ny fihariana. Tsy tsapa loatra ny vokatry ny fifanarahana ankoatra ny fiahiana sosialy samihafa hanamaivanana ny fiantraikan’ny haintany tao anatin’ny taona maro nifanesy. Ao anatin’ny hamehana ny vahoaka any atsimo, araka ny fanadihadiana nataon’ny BNGRC farany teo. Ny volana jona sy jolay lasa teo, nahatratra 730 522 (21%) ny olona ao anatin’ny distrika maromaro: Ambovombe, i Beloha, i Tsihombe, Amboasary, Ampanihy ary i Betioky tsy manana fiahiana sakafo. Tombanana hiakatra 916 201 (26%) ny tarehimarika hatramin’ny faran’ny taona. Mila asa mivaingana mipaka any aminy haingana ireo vahoaka ireo, indrindra ny kilonga madinika mhtratra 35 393 ahina ho tratan’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika amin’ny distrika voalaza etsy ambony. Manaitra ny sain’ny mpitondra ny fiarahamonim-pirenena avy any Androy misolo tena ny mponina manoloana ny zava-misy satria mbola miady amin’ny vokatry ny haintany ny mponina.Hotontosaina any Inde ny fivoriana iadiana amin’ny tsy haha tanihay ny firenena aty Afrika ka fotoana izao hanombanana ny zava-bita 25 taona aty aorian’ny nanaovantsika sonia ny fifanarahana. Mangataka ny hanaovana tatitry ny ezaka vita tao anatin’izay fotoana rehetra izay ny filohan’ny vovonan’ny fiarahamonim-pirenena sy ny fikambanana Actions sans frontières.Vonjy L’article Mila asa mivaingana: olona 916 201 tsy misy fiahiana sakafo a été récupéré chez Newsmada.
Manoro ny lalana handresena amin’ny ady amin’ny fanolanana ny vadin’ny Filohan’ny Repoblika sady filohan’ny fikambanana Fitia, Rajoelina Mialy, ka nampirisika ny fitorohana an’ireo olon-dratsy tompon’antoka amin’ny herisetra ara-pananahana. Manaporofo ny fahavononany hiady amin’ny endrika herisetra rehetra ny fanambaràna mafonja nataony, omaly: “amin’ny maha vehivavy ahy, tena vaky ny foko. Amin’ny maha reny ahy, dia tezitra aho”. Nanohina an’ity renimpianakaviana ity ny fahamaroan’ireo fitarainana sy vaovao momba ny trangana fanolanana, tato ho ato, ka nanaovany antso avo mba tsy hanakobonana an’ireny herisetra any anaty fiarahamonina ireny, na iza na iza. “Aoka izay ny herisetra, ampy izay ny fahanginana. Melohiko ny herisetra, sahia mitoroka sahia mijoro”, hoy ny vadin’ny Filoham-pirenena. Narahiny toromarika tamin’ny famerenana fampahafantarana sy fanoroana ny fanatonana haingana an’ireo ivon-toerana manokana fandraisana ny fitarainana momba ny herisetra ireo hafatra ireo, toy ny etsy Mahamasina na eny Befelatanana na ihany koa ny Borigady misahana ny fiarovana an’ireo zaza tsy ampy taona. Tsy tokony hatahotra hanatona an’ireo ivon-toerana manokana ny olona. Nomarihiny fa ireo olona, izay matetika havana akaiky na fianakaviana na mpifanolo-bodirindrina ihany, no manao an’io fomba ratsy io. Fandraisana an-tanana Nahare trangana herisetra ara-pananahana hafa sahady Rajoelina Mialy, omaly, ka nidina haingana tetsy amin’ny ivon-toerana Vonjy, teny Befelatanana, araka ny loharanom-baovao marimpototra. Zaza iray, manodidina ny roa taona, no manaraka fitsaboana eny rehefa lasibatry ny fanolanana nataona ankizilahy, manodidina ny 16-17 taona. Fantatra fa handray an-tanana ny fitsaboana azy rehetra ny vadin’ny Filohampirenena, izay marihina fa sady masoivohon’ny Tahiry iraisam-pirenena misahana ny mponina amin’ny lafiny fiarovana ny reny sy ny zaza. Miantso ny fampiharana sazy faran’izay henjana amin’ireo mpanao herisetra ireo ny filohan’ny fikambanana Fitia. “Tsy ianao fa izy ireo no diso. Aza misalasala, aza matahotra”, hoy hatrany Rajoelina Mialy. Nampahatsiahiviny ny fananan-kerin’ny lalàna manokana hiarovana an’ireo olona marefo ireo. Hery sy tosika lehibe amin’ny fampahombiazana ny ady amin’ny fanolanana izao nataon’ny vadin’ny Filohan’ny Repoblika izao, izay mila ny fiaraha-mientana sy ny fandraisana andraikitry ny sokajin’olona rehetra. L’article Ady amin’ny fanolanana :: “Aoka izay ny herisetra. Ampy izay ny fahanginana”, hoy Rajoelina Mialy est apparu en premier sur AoRaha.
Besarety: nirefodrefotra ny basy, jiolahy roa rotiky ny balan’ny polisy
Nandriaka ny ra! Nihorohoro vao maraina ny mponina eny Besarety ny asabotsy vao maraina teo nandritra ny fifampitifirana teo amin’ny jiolahy sy ny polisy misahana ny heloka bevava. Jiolahy roa maty rotidrotiky ny bala raha dimy hafa azo sambo-belona.Araka ny fampitam-baovao voaray teo anivon’ny sampandraharaha misahana ny fampitam-baovao eo anivon’ny Polisim-pirenena, naharay angom-baovao ny polisy fa misy fikambanan-jiolahy mitam-piadiana mahery vaika mikasa hanao fanafihana eny Ankadivato tamin’io fotoana io. Nidina haingana teny ary nihatrana mialoha ny polisin’ny BC sakelika fahefatra (BC4) ka tratra teny Ankadivato tokoa ny jiolahy roa saika hanao izany raha efa lasa nandositra ireo namany. Tsy nijanona teo anefa ny fikarohana sy ny fanadihadiana nataon’ny polisy ka tratra teny Ambohijatovo ny jiolahy iray isan’ireo tompon’antoka amin’ity fikasana hanao fanafihana ity. Fantatra tamin’io fotoana io ihany fa nitsoaka tamin’iny lalana mihazo an’Ivato iny ny sasany amin’ireto jiolahy ireto.Basy PA roa tratra tany amin’ireo jiolahy…Nanenjika azy ireo ny polisy ka raikitra ny fifampitifirana, toy ireny amin’ny horonantsarimihetsika ireny ny fifandonana araka ny fitantaran’ireo olona nahita ity fifampitifiran’ny polisy sy ny jiolahy ity. Tsy naharesy tosika ireo polisy anefa izy roa lahy ka nilavo lefona. Mbola nisy ihany ireo tafatsoaka ary tsy nieritreritra intsony fa hoe hanenjika azy ireo ny polisy ka niafina teny Besarety. Tsy namelan’ny polisy hatrany anefa ry zalahy ka taorian’ny fikarohana natao nandritra ny fifanenjehana, hita koa ny toerana nieren’ireto jiolahy ireto. Raikitra indray ny fifampitifirana satria nanohitra tamin’ny alalan’ny tifitra izy ireo. Vokany, maty tsy tra-drano ireo jiolahy. Tratra ny basy PA nampiasain’izy ireo tamin’ity fanafihana ity. Andrasana ny tohin’ny fanadihadiana ataon’ny polisy momba ireto fikambanan-jiolahy mpanao fanafihana ireto.Jean ClaudeL’article Besarety: nirefodrefotra ny basy, jiolahy roa rotiky ny balan’ny polisy a été récupéré chez Newsmada.